We.com.mm - တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရမ်းချစ်တဲ့သူတွေ နေ့တိုင်းပြုလုပ်ကြတဲ့အရာ (၅) ခုက…
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရမ်းချစ်တဲ့သူတွေ နေ့တိုင်းပြုလုပ်ကြတဲ့အရာ (၅) ခုက…
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရမ်းကိုချစ်ပြီး အချိန်ကာလကြာကြာလက်တွဲနေကြတဲ့သူတွေက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်မှုတွေ အပြည့်အဝရှိပြီး အရမ်းကိုကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်…။ ဖူးစာပါလို့တွဲနေတဲ့သူတွေဆိုတာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ယုံကြည်မှုတွေရှိပြီး ပျော်ရွင်နေကြတဲ့သူတွေပါ…။ ဝဋ်ကြွေးဆပ်နေတဲ့သူတွေကတော့ နေ့တိုင်းနီးပါးရန်တွေဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မယုံကြည်မှုတွေနဲ့ အမြဲတမ်းပြဿနာတတ်နေကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီတော့ တကယ်ချစ်ကြတဲ့သူတွေ စစ်မှန်တဲ့သူတွေနေ့တိုင်းလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ အရာလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…။
၁. နှစ်ယောက်အတူတူအချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးကြတယ်…။
နှစ်ယောက်အတူတူရှိနေတဲ့ အားလပ်ချိန်တွေမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်လေးတွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးကြတယ်…။ တီဗွီတွေတူတူကြည့်တယ်… အားလပ်ချိန်တွေကို အတူတူအသုံးချကြတယ်…။ တစ်ချို့စုံတွဲတွေကြတော့လည်း အားလပ်ချိန်တွေကိုတောင် ချစ်သူနဲ့အတူတူအချိန်မပေးနိုင်ပဲ တစ်ယောက်ထဲနေချင်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်…။ ကိုယ့်အားလပ်ချိန်တွေကို ကိုယ်တိုင်ပဲအသုံးချချင်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း တကယ်ချစ်ကြတဲ့သူတွေကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကောင်းကောင်းအချိန်ပေးပြီး နွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကို ဖန်တီးတတ်ကြပါတယ်…။
၂. တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချီးမွမ်းပြောဆိုကြတယ်…။
တကယ်ချစ်ကြတဲ့သူတွေကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အသေးအဖွဲလေးတွေကအစ ချီးမွမ်းပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်…။ ဥပမာ အဝတ်အစားအသစ်လေးတွေ ဝတ်လာတဲ့အချိန်မျိုးကအစ အရမ်းမိုက်တာပဲ အရမ်းလိုက်တယ်လို့ပြောပေးတာမျိုးကလည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပွင့်လင်းလာစေပြီးရင်းနှီးမှုတွေရရှိလာစေပါတယ်…။ လေ့လာမှုတွေအရ လူတစ်ယောက်ကချီးမွမ်းစကားတွေ ပြောခံရတဲ့အခါမှာ မျက်နှာမှာအပြုံးလေးတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်…။ ဒါက သူ့စိတ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးပါပဲ…။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချီးမွမ်းပြောဆိုကြတဲ့အချက်တွေက ရင်းနှီးမှုတွေရှိစေပြီး သာယာတဲ့ဘဝမျိုးကိုရရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
၃. စကားလုံးလေး သုံးလုံးကို အမြဲတမ်းပြောတတ်ကြတယ်…။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြဖို့ဆိုတာ ဂရုစိုက်ပြရမယ်၊ ကြင်နာပြမှတစ်ဖက်လူက သိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒါတွေအပြင် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ပြီး အရမ်းကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့သူတွေက နေ့တိုင်းနီးပါးလိုလို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတွေကို ပြောတတ်ကြပါတယ်…။ မနက်မိုးလင်းလာလို့ Morning Message လေးပို့ပေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်း I Love You ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကိုလည်းထည့်ပြီး ပြောတတ်ကြပါတယ်…။ တစ်ချို့တွေကြတော့လည်း ဖုန်းပြောလို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာတောင် “ အရမ်းချစ်တယ် ” ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေကို ပြောတတ်ကြပါတယ်…။
၄. တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စောင့်ကြည့်နေတယ်…။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တစ်နေ့လုံးဖုန်းပြောနေတာမျိုးတွေ လုပ်နေကြပေမယ့်လည်း တစ်ယောက်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီး လေ့လာနေတယ်ဆိုတာကလည်း တစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူတွေမှာပဲ တွေ့ရနိုင်တာပါ…။ မယုံလို့လိုက်ကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဒီတိုင်းဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာကို လေ့လာနေတာမျိုး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သတိတရနဲ့ လေ့လာတာတွေကြောင့် တကယ်ချစ်ကြတယ်လို့လည်း ဆိုလို့ရပါတယ်…။
၅. အတူတူရယ်မော ပျော်ရွင်ကြတယ်…။
နှစ်ယောက်အတူတူ ရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ပျော်စရာအကြောင်းလေးတွေပြောပြီး ရယ်မောနေကြတာတွေကလည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုချစ်ပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးလည်း ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ အမြဲတမ်းရယ်ရယ်မောမောနဲ့ နေနေတဲ့စုံတွဲတွေက တစ်သက်လုံး ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားကြလေ့ရှိတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေအရသိရှိရပါတယ်…။
အသည်းကွဲနေတဲ့အခါ ဒီအချက် (၅) ချက်ကိုလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မခံစားရတော့ဘူးပေါ့…
Crush က ပြန်ကြိုက်လာအောင် အွန်လိုင်းမှာတင်လုပ်လို့ရတဲ့ အလွယ်ဆုံး ( ၈ ) နည်း
ကြောင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကို “You Are My Sunshine” သီချင်းနဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
Fan girl တွေကို အသည်းကွဲသွားစေတဲ့ Keanu Reeves ရဲ့ ရုပ်သွင်အသစ်
နယ်စပ်ခိုးဝင်ပြဿနာကို အစ္စရေးတို့ ပြတ်ပြတ်သားသားကိုင်တွယ်ကြပုံ
Disney Princess လေးတွေကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်မယ့် ကိုယ့်ရဲ့မွေးလ နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ
July5ရက်နေ့မှာ အမိမြေမြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာမယ့် မြန်မာလူမျိုး ထိုင်းမင်းသားလေး Eve